Daawo muuqalka: Qaramada Midoobay oo Kashiftay in Amisom Saddex kun oo askari looga dilay Soomaaliya |
Daawo muuqalka: Qaramada Midoobay oo Kashiftay in Amisom Saddex kun oo askari looga dilay Soomaaliya
Mas’uul sare oo ka tirsan Qaramada Midoobay ayaa shaaca ka qaaday in tiro gaaraysa ilaa 3,000 “Saddex Kun” oo askari oo ka tirsan Ciidamada Afrikaanta ah la dilay tan iyo Sanadkii 2007-dii markaas oo ay Soomaaliya yimaadeen iyagoo gurmad u ah Ciidamadii Itoobiya ee xilligaas dagaallada adag lagula jiray.
Sarkaalka oo lagu magacaabo Jan Eliasson isla markaana ku xigeen u ah ninka madaxda ka ah Qaramada Midoobay ee Ban Ki Muun ayaa Warbaahinta u sheegay in arrin laga argagoxo ay tahay tirada Ciidamada Afrikaanta ah oo looga xasuuqay Wadanka Soomaaliya isagoo tacsi tiiraanya leh u diray wadamadii iyo qoysaskii ay askartaas ka halaagsameen.
“ Waxaa laga yaabaa inaad argagaxdaan haddii aan idiin sheego in Ciidamo gaaraya 3,000 oo askari Amisom looga dilay Soomaaliya tan iyo markii ay halkaas tageen sanadkii 2007, Yugaandha iyo Burundi ayaa ugu daran oo dhibaatada ugu daran ay soo gaartay, sidoo kale Kenya oo ay Ciidamo badan kaga jiraan Amisom ayaa iyadana qaybteeda dhibaatadu kasoo faartay” sidaas waxaa yiri Jan Eliasson, oo ah kuxigeenka Ban Ki Muun.
Mas’uulkan ka tirsan Qaramada Midoobay oo ka hadlayay shirkii ka dhacay Magaalada London ayaa ka codsaday wadamada Caalamka ee sheegay in ay Lacago qaaraan ah usoo ururinayaan Dowlada Xassan Sheekh in ay qayb ka mid ah qaaraankaas siiyaan Ciidamada Afrikaanta ah ee ay Musiibadu kula habsatay dagaalka ay kula jiraan ciidamada Xarakada als habaab.
Dhacdadii ugu darnayd ee Ciidamadaas lagu Xasuuqay ayaa dhamaadkii sanadkii 2011 waxay ka dhacday Degmada Dayniile halkaas oo saacado kooban gudaheed looga dilay tiro gaaraysa 150 askari, iyadoo ay Mujaahidiintu soo bandhigeen 76 ka mid ah Ciidamadii maydadkooda fagaaraha dagaalka ay Gaaladu uga carartay.